Masinina Fofomotra Aerosol, fonon-tanana azo itokisana, akanjo fitondra-miaro - Zhongmaohua
Fantaro bebe kokoa momba antsika GO
Shijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd dia mifantoka amin'ny fitaovana fisorohana, famoronana sy varotra, famarotana manerana izao tontolo izao, ny vokatra any Etazonia, Japana sy Eropeana, ny varotra avy any ivelany no nibodo ny varotra mihoatra ny 60%.
Ny tanjonay amin'ireo vokatra kalitao avo lenta, serivisy kilasy voalohany, tombontsoa miaraka ary orinasa mpandresy.
Masinina mpitrandraka sy malemy
Ny vokatra kalitao, serivisy kilasy voalohany
Shijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd, dia mifantoka amin'ny fitaovana fisorohana, ny fanamboarana sy ny varotra, ny entana vokarintsika dia namidy manerana an'izao tontolo izao.
Porofon'ny fanondranana: 91% - 100%
fihodinana: Miliara $ 10 tapitrisa dolara - 50 tapitrisa dolara amerikana
Mpiasa mihoatra ny 150
Ny laharana famokarana: 5
No. Ny mpiasa R&D: Olona 11 -20
Ny mpiasan'ny QC: Olona 5 -10
Faritra lehibe: Amerika, Eropa Atsinanana, Eropa, Eropa Avaratra, Marika hafa, Eropa Andrefana, Eran-tany, Azia, Oseania
Distributor / Mpanararaotra, mpanamboatra, mpivarotra, serivisy, orinasa mpivarotra
Amerika, Eropa Atsinanana, Eropa, Eropa Avaratra, Pasar hafa, Eropa Andrefana, Eran-tany, Azia, Oseania
Ny fonony dia mahatratra 13000 metatra tora-droa miaraka amin'ireo mpiasa mahay izay maherin'ny 150 ary milina efa ho 100.
Nahoana safidio izahay
Mirehareha isika fa tokana ihany ny orinasa izay manafatra milina CNC, milina haingam-pandeha avo lenta, manafatra milina fanoratana jet tempie sy tsipika fivarotana automatique, izay manavaka ny vokatra vokarintsika.
Ny vokatra vaovao dia aroso isan-taonan'ny ekipa matihanina matihanina sy ny ekipa injeniera mba hampiroborobo ny tsenan'ny mpanjifa. Ny fizotry ny famokarana tsirairay dia hodinihin'ny ekipan'ny QC mba hahazoana antoka ny kalitao.
by admin May-07-2020
Fitaovana palitao PVC azo ampiasaina, fonon-tànana vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika polymer, izay ...
Ahoana ny fanavahana sy ny fampiasana ...
Ahoana ny fomba fanavahana sy hampiasana fitafiana mitokana sy akanjo fiarovana ara-pitsaboana Inona no mahasamihafa ...
Tongasoa eto amin'ny orinasa Ours
Tongasoa eto amin'ny orinasa Ours talohan'ny nananganana ny orinasa vaovao anay dia niasa izahay tamin'ny ...